isivumelwano: imbeko engavulwanga ye-6x yehla ukuya kwi-150 yeedola kwi-amazon kunye nokuthenga okungcono, elona xabiso liphantsi ukuza kuthi ga ngoku
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Idili: I-Honor evulekileyo ye-6X yehla ukuya kwi-150 yeedola kwiAmazon kunye nokuThenga okungcono, elona xabiso liphantsi ukuza kuthi ga ngoku
Idili: I-Honor evulekileyo ye-6X yehla ukuya kwi-150 yeedola kwiAmazon kunye nokuThenga okungcono, elona xabiso liphantsi ukuza kuthi ga ngoku
U-Huawei wathembisa ukukhupha i Uhlaziyo lwe-Android 8.0 Oreo lwe-Honor 6X , kodwa thina & apos; asiqinisekanga ukuba oko kuyakwenzeka xa kuphela unyaka. Ewe, ukuba ungumnini we-smartphone, unokuqiniseka ukuba uya kukwazi ukuphucula isoftware yayo ngaxa lithile kwiinyanga ezizayo.
Kodwa ukuba awunayo i-Honor 6X kwaye ufuna enye, ngoku iya kuba lixesha elifanelekileyo lokuyithenga kuba iAmazon inesithembiso esihle kakhulu phakathi kuluhlu lwe-smartphone.
Okwangoku, i-Honor 6X ithengisa e-United States malunga ne-200 yeedola ngokuthe ngqo, kodwa iAmazon inentengiso nge- $ 150 nje, ke abathengi baya kuxhamla kwisaphulelo sama-25% ukuba bathatha isigqibo sokuya kwintengiselwano.
Kufanelekile ukuba uqaphele ukuba i-smartphone iza ivuliwe ecaleni kwewaranti yase-US. Gcina ukhumbula ukuba le nguqulo ye Imbeko 6X ayisebenzi kwiziphathamandla zeCDMA ezinje ngeSprint neVerizon, kodwa akufuneki ube nayo nayiphi na imiba oyisebenzisa kwi-AT & T nakwiT-Mobile.
Ukuba ukhetha, i-Best Buy ineHonor 6X 32GB kwintengiso kwaye ungayifumana ngexabiso elifanayo- $ 150. I-smartphone iza nokukhetha imibala emithathu: iGolide, iGrey kunye neSilivere.
umthombo: IAmazon , Eyona Ntengiso nge 9to5Toys
ndiphulukane nayo vs pal yam yomzimba
isamsung galaxy s5 ukutshaja ngokukhawuleza
Iifowuni zasimahla ezivela kwi-t
Fumana iitoni zeeorbs zasimahla ezidlala iiMpawu zoMlilo oMlilo kule veki; umsitho okhethekileyo wongeza izicelo ezitsha kunye neemephu
Iifowuni ezinobomi obubhetele bebhetri (2021)
Iapile kunye neapos; s i-iPhone ye-iPhone ye-12, iPro, kunye noMsitho wokubhengeza uMax unokuwela kwi-Prime Day 2020
Isamsung kunye neapos ye-Gear Fit2 Pro 'yokomelela komzimba' iyathengiswa ngexabiso eliphantsi $ 80 ($ 120)
Imicimbi emnyama yangoLwesihlanu wePixel: ezona zivumelwano zibalaseleyo zePixel 4, iPixel 3, iPixel 3a